Ungathola kanjani abalandeli abaningi? - Semalt Kwembulwa Izimfihlo Zomphakathi
Kunoma yiliphi ibhizinisi le-intanethi, ukukhula kwenani labalandeli bakho kuyiphupho eliphumelelayo.Abantu abaningi abakha iwebhusayithi yabo ye-e-commerce bafuna ukufeza okuhle kakhulu kwemisebenzi yabo, ngakho-ke bayakhetha uku-intanethi iziteshi zokumaketha. Ukukhangisa ku-inthanethi kuhilela amasu edijithali njenge-Search Engine Optimization (SEO) kanye ne-Social Media Marketing(SMM). Lezi zindlela zihlukile, kodwa konke okuhlosiwe ekulethe izivakashi esiteji sakho somnyango. Amapulatifomu ezokuxhumana nabantu njenge-Facebookokulandelayo kwabasebenzisi abangaba ngu-2billion emhlabeni jikelele.
Uma umuntu ebona okuqukethwe kwe-intanethi, inqubo i-AIRC yenzeka - contratar servidores dedicados baratos rda. Lokhu kwenzeka ukuthi ngabe okuqukethwe kubonakala ku-SERP, isikhangiso esihlosiwe sokuphequlula ngokuqondile. Iwebhusayithi yakho kufanele ibeuyakwazi ukwenza lo msebenzi noma ngabe izinhlelo zokuxhumana zenhlalo ngeke zisebenze. Njengoba kushiwo ngenhla, i-SEO ne-SMM kuletha izivakashi kusayithi lakho, okuyintolimelela isitolo sangokwenyama. Uma unezivakashi, kungumsebenzi wewebhusayithi yakho ukuguqula lezi zivakashi kumakhasimende.
Ivan Konovalov, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi, inikeza amathiphu abalulekile ekuhloleni ukuhlaziywa kwezinethiwekhi zenethiwekhi.
Khulisa izethameli zakho
Emithonjeni yezokuxhumana, kungabalandeli bonke. Kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isikhala osikhethayo, kunjaloumdlalo wezinombolo. Ukuphakama inani labalandeli kungcono isimo somkhankaso wakho wokumaketha online. Ngokwesibonelo, Facebookfuthi i-Twitter ingakusiza ukuba ukhule le namba ngokukwabelana ngolwazi, ukuphindaphindeka nokudala izikhala zekhwalithi..Ezinye izinkomba ezimnyama zekhanda ezinjalo njengoba okulandelayo kukhokhelwa kungase kungabi nakakhulu ekuphumeleleni kwe-e-commerce. Kunoma yikuphi, ubeka engozini inhlawulo kuleso simo ku-Google SERPs.
Nokho, ukuthola okuqhubekayo okulandelayo emphakathini wezokuxhumana akuyona umsebenzi olula. AmathuluzinjengoKlout kungakusiza ukuthi uthole isithombe se-buzz yakho yomphakathi. Balinganisa ithonya lomphakathi kanye nokukubonisa okuqukethwe okuhambayo.
Njenge-SEO yendabuko, imithombo yezokuxhumana esebenzayo ihilela ukusetshenziswa kwabanye amagama angukhiye akhethiwe ngokukhethekile ukukusiza ubeke isigaba. Khumbula, iphaneli lokusesha imithombo yezenhlalo iziphatha njengenjini yokuhlola evamile. Ngaphezu kwalokho,okuqukethwe kokuxhumana kwezenhlalo kuyinjini yokusesha indexed. Amagama akho angukhiye nokuqukethwe kuma-platforms wezokuxhumana wezenhlalo njenge-Facebook avela ku-I-SERP njengamakhasi akho wewebhu.
Amanethiwekhi omphakathi wezokuxhumana njenge-Facebook ne-Twitter anesipiliyoni esihle sokwenzaizikhangiso eziku-intanethi. Into enhle ukuthi, ngezikhangiso ezikhokhelwayo, unganciphisa ukubhekisa kubantu abanesithakazelo esifanayo. Ukusebenzisa amathuluzi akhethekile, ungakwazi ukukopisha abalandeli usebenzisa uhlu lwakho lwamanje lwe-imeyili bese ufinyelela ezingeni elisha. Imithombo yezokuxhumana elandela izikhangisokungenza iphupho lakho le-e-commerce liphumelele.
Ukumaketha kwedijithali, imidiya yezenhlalo ingenye yokumaketha okunethezeka kakhulu kwe-intanethiamapulatifomu. Imithombo yezokuxhumana inekhono lokufinyelela izigidi zabasebenzisi emhlabeni jikelele. Ngenxa yalokho, iwebhusayithi yakho ingathola umhlaba olandelayo wabhalisile abangaphezu kwezigidi. Inkinga yalokhu indlela yokwenza i-Social Media Marketing ngokwayo. Ingxenye yesisombululo salokhu kuhlanganisa iamathiphu kulesi sihloko. Ungakwazi ukusebenzisa idatha ye-social media analytics futhi wenze ukulungiswa okudingekayo ekukhangiseni kwakho kwe-intanethi umkhankaso. Lawa macebiso azosiza futhi imizamo yakho ye-SEO ngokwenza isikhundla sakho sewebhu sibe phezulu kuma-SERP.